Wasaarada dekadaha Puntland oo yeelatay dhisme cusub oo qurux badan - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandWasaarada dekadaha Puntland oo yeelatay dhisme cusub oo qurux badan
Xarunta cusub ee wasaarada dekadaha dowlada Puntland.
Boosaaso-(Puntland Mirror) Wasaarada dekadaha dowlada Puntland ayaa yeelatay dhisme cusub oo qurux badan oo laga dhisay magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso.
Dhaqaalaha ku baxay dhismaha ayaa waxaa maalgeliyay dalka Denmark oo u soo mariyay haayada Qaramada Midoobay ee UNOPS.
Munaasabada xariga looga jarayay dhismaha cusub ayaa waxaa ka qaybgalay masuuliyiin ka tirsan dowlada Puntland oo uu kamid ahaa wasiirka dekadaha Cabdulaahi Jaamac, saraakiil ka socday haayada UNOPS iyo safiirka Soomaaliya iyo Kenya u qaabilsan Denmark Mette Knudsen oo dalkiisu maalgashay dhismaha.
Dhismaha wasaarada ayaa ka kooban laba dabaq waxaana dhismihiisu uu socday muddo ka badan 9 bilood sida ay sheegeen saraakiisha shirkada Al Bashid oo dhistay dhismaha.
September 6, 2016 Diyaarad sida qaadka Miirowga oo timid magaalooyinka Puntland iyadoo dowlada federaalka hakisay qaadka Mirowga ee Kenya
August 15, 2016 Madaxweyne Shariif Xasan: Waxaanu ka shaqayn doonaa horumarka
Garoowe-(Puntland Mirror) Puntland iyo dhammaan haweenka Soomaaliyeed ayaa us soo baxay warbaahinta bulshada kadib sii deyntii xildhibanada cusub ee Puntland ee la soo doortay. Dumarka ayaa ka xanaaqay markii hal xubin ay ka heleen baarlamaanka [...]